Ireto ny fitomboan'ny vidiny! RayHaber
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ireto ny fitomboan'ny vidin!
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş Ankara 06, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia, Commuter Trains, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, TORKIA 0
mitombo ny vidiny rehetra
Ireto ny fitomboan'ny vidiny! .. Fividianan-dàlana vaovao, tetezana ary fiakaran'i YHT. Ny herinaratra, ny fitsangatsanganana entona voajanahary dia tsy mahavelona ny fahatairana ataon'ireo olom-pirenena; ny làlam-be sy ny tetezana, ny YHT sy ny tapakilan'ny fiaran-dalamby, ny saram-pivarotana mihetsika noho ny fiakaran'ny vidiny.
Ny fitomboan'ny 20 amin'ny lalamby mivezivezena, fiaran-dalamby sy amin'ny postage dia hamorona loaka vaovao amin'ny teti-bolan'ny olom-pirenena. Aorian'ny tolotra dia tsy isalasalana fa hanova fanovana vaovao amin'ny vidin'izy ireo ny orinasan'ny bus.
Nankany Istanbul tamin'ny fiara tsy miankina dia lafo kokoa. Ny mpamily fiara iray avy ao Izmit West mankany Istanbul dia handoa 6 TL ho an'ny fivoahana Çamlıca ary 10,5 TL ho an'ny fiampitana ilay tetezana. Rehefa miova ny vidin-tsolika isan'andro dia hita fa miharatsy ny dia.
ANKARA SY FIKAMBANANA IZMIR
Ny mpamily fiara iray hiditra ny lalambe avy any Atsinanana mankany Izmit ary mankany Ankara dia handoa 25,75 TL miaraka amin'ny fiakarana vaovao amin'ny fivoahana Akıncı. Amin'ny lafiny iray, lafo kokoa ny mankany amin'ny Izmir satria fananan'ny orinasa tsy miankina iray ny làlambe. Altinova-Bursa Avaratra eo anelanelan'ny 33,50 TL, Bursa West-Izmir eo anelanelan'ny vola 119,75 TL. Ny vola ho an'ny İzmir dia mihoatra ny 150 TL.
T tari-tapakila TCDD'nin dia ho manan-kery manomboka omaly, amin'ny fananganana sidina 20 isan-jato. Ny dia fitsangatsanganana YHT teo anelanelan'i Izmit sy Ankara dia nitombo nanomboka tamin'ny 66 TL ka 79,50 TL. Ireo izay handeha any Eskişehir dia handoa 43,50 TL fa tsy 52,50 TL. 19,50 TL mankany Istanbul Pendik na Söğütlüçeşme miaraka amin'i YHT, Halkalı26,50 TL handeha.
Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby mankany amin'ny zotra ambanivohitra dia hita taratra kely ihany koa. Ny vidin'ny kaominaly Izmit-Istanbul dia nitombo avy amin'ny 11 TL mankany 11.50 TL ary ny vidin-tserasera Izmit-Adapazari dia nitombo avy amin'ny 10 TL mankany 12 TL. 65 fihenam-bidy amin'ny tapakilan'ny lamasinina ho an'ny olom-pirenena mihoatra ny 50, mitohy ny fihenam-bidy 26 ho an'ny tanora latsaky ny 15.
VAOVAO FARANY (fiara)
Fidirana Izmit East
Fidirana Izmit West
Fidirana ao Altinova
Lalamby môtô KMO
16,85 TL avy any Glad North mankany Kurnaköy
TSARA FAMPISORANA FAMPISORANA FARANY
Izmit (Kurucesme) - Trano 40 TL
Tetezana, seranam-piaramanidina sy fiarabe fitateram-bidy no hatsangana? 16 / 04 / 2019 Ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia nanao fivoriana momba ny artırma mitombo ny tahiry sy ny vola miditra miaraka amin'ireo kadra, anisan'izany ny fitantanana ambony ny làlana, ny PTT sy ny TCDD Transport. Nandritra ny fivoriana dia niresaka ihany koa ny tetezana, làlambe sy ny fiaran-dalamby. Ny tompon'andraikitra ankapobeny mifandraika dia nilaza fa azo atao ny mampitombo ny serivisy amin'ny fanontaniana izay hampitombo ny vola ary milaza hoe: "ny fanapahan-kevitra dia ny politika. Ny minisiteran'ny Tahirim-bolam-panjakana sy ny Fitantanam-bola vao haingana dia nangataka andrim-panjakana sy fikambanana feno mba handray fepetra hampitomboana ny tahiry sy ny vola ary handraisana fepetra amin'ity lafiny ity. Ireo ministera rehetra, indrindra ireo mpampiasa vola dia nanomboka niasa tamin'ity resaka ity. Amin'ny Ministeran'ny fitaterana, bir
Hahafinaritra ny taxi eto Istanbul! Ity ny Tarifa Vaovao! 28 / 05 / 2019 Tombanana fiarakaretsaka an-tariby any Istanbul ny volana aprily. Omaly, ny lehiben'ny Chamber of Tradesmen avy any Istanbul Taxi, Eyup Aksu Filoha Erdogan dia nilaza fa niteny izy ireo tamin'ny faran'ny volana Jona ny fisokafan'ny takam-pivarotana taxi avy amin'ny 4 TL ka hatramin'ny 6 TL mileage ny saran'ny 2.50 TL 3.25 TL nilaza. Izany no fotoana 3. Hiankina ihany koa ny vidin'ny taxi ao amin'ny seranam-piaramanidina. Tany am-piandohana, olom-pirenena iray te-hankany Beylikdüzü 150 TL dia mandoa ny faran'ny volana Jiona, io sary io dia momba ny 200 lira. Araka ny vaovao tao SÖZCÜ; Ny Istanbul Chamber of Taxismen Tradesmen Chamber (ITOO) dia nanambara tamin'ny volana 2019 ny fandaharam-potoana ho an'ny fitaterana distrika ho any amin'ny seranam-piaramanidin'i Istanbul.
Ireto ny tetikasa ny avonavon 'Torkia 02 / 03 / 2015 Ireto ny tetikasa ny avonavon 'Torkia: Channel Istanbul, Marmaray, Istanbul 3. Airport, Yavuz Sultan Selim Bridge, Tionelin'i 3 Floor Large Istanbul, Torkia ny endriny ny fanovana amin'ny tetikasa. Ireo tetikasa vaovao dia omena ireo tetikasa arahin'izao tontolo izao amim-pankasitrahana. Ny tetikasa lehibe 72 amin'ny lalambe amin'ity taona ity dia ampidirina am-panompoana. Ny minisiteran'ny fitaterana, ny raharaha maritime ary ny serasera dia nahatsapa tetikasa lehibe toy ny Marmaray, lakandranon-tongotra ambony (YHT) Ankara-Istanbul miaraka amin'ny 13 miliara mony nandritra ny taon-dasa 260 farany. seranam-piaramanidina, tetezana Yavuz Sultan Selim (3. Bridge), lalana Istanbul-Izmir, lalamby lalamby Kars-Baku-Tbilisi, 3 Tunnel Istanbul Tunnel Project no nanomboka. Istanbul-Izmir ...
Ny tetezana ho an'ny tetezana sy ny làlambe dia miditra amin'ny dingana vaovao 05 / 02 / 2013 Ny fampivoarana ny tetezamita sy ny seranan-tsambo nankatoavin'ny lalamby dia niditra tamin'ny dingana vaovao Taorian'ny fanambarana ny fanombanana ny tetibolam-panjakana sy ny fampindramam-barotra an-dalàmbe, dia nodinihin'ny maso ny fanapahan-kevitra farany amin'ny Filankevitry ny High Society Privatization (AGB). Ny Holding Nurer, izay nandray anjara tamin'ny fifanarahana ho an'ny fampiantranoana ny tetezana sy ny làlambe tamin'ny volana lasa, dia mijery akaiky ny dingana vaovao ihany koa. Ny Filankevi-Pifindram-piaraha-monina, tarihin'ny Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan, dia handray fanapahan-kevitra farany momba ny fisoloan-tena. Ny praiminisitra lefitra Ali Babacan, minisitry ny fitantanam-bola Mehmet Simsek, minisitry ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny Erdogan Bayraktar ary ny minisitry ny seranam-piaramanidina sy ny minisitry ny serasera Binali Yildirim. Taorian'ny fanambaràn'ny praiminisitra, fanavaozana ny tolotra vaovao nasıl
Ity ny tetezana vaovao natokana ho an'i Londres 01 / 07 / 2014 Ity ny tetezana vaovao nomanina ho an'i Londra: Ny Lapan'ny Varotra London dia mikaroka fiara vaovao sy bisikileta vaovao izay atolotra ho atsinanana amin'ny renirano Thames. Ny sarin'ireo tetezana vaovao nomanin'ny mpikaroka HOK sy Arup dia mampiseho làlana manokana ho an'ny bisikileta sy fiara fitateram-bahoaka. Ny tetezana azo ampiasaina dia avo lenta ho an'ny fifamoivoizana an-dranomasina, ary ny seranam-piaramanidina ao an-tanàn-dehiba eo an-toerana dia ambany loatra amin'ny fiantraikan'ny architects, manamarika fa ny fifamoivoizana eo avaratra sy atsimon'i Londres dia hialokaloka tanteraka, hoy izy. Ity tetezana ity dia soso-kevitra hanorina eo anelanelan'ny Galions Reach sy ny Thamesmead eo amin'ny morony mifanohitra. Ny sandan'ny sandan'ny sandam-bola dia mahatratra $ 600 tapitrisa. Tetik'asa mitovitovy amin'ny tantaran'i Londres taloha.
Hahafinaritra ny taxi eto Istanbul! Ity ny Tarifa Vaovao!
Ireto ny tetikasa ny avonavon 'Torkia
Ny tetezana ho an'ny tetezana sy ny làlambe dia miditra amin'ny dingana vaovao
Ity ny tetezana vaovao natokana ho an'i Londres
Ny University of Necmettin Erbakan dia manolotra asa fanompoana ho an'ny mpianatra voasoratra ao amin'ny YHT
Ny anjaran'i YHT amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpizahatany tonga any Eskişehir
Ny isan'ny mpitsidika tonga tany Konya taorian'ny YHT dia nahatratra 13 tapitrisa
3. Tetezana mahomby
Tetik'asa Bridge in Boschorus